Efa antitra araka ny tsapanao ve ianao? Miankina betsaka amin'ny endrika andro io. Na ahoana na ahoana, ny lohahevitry ny taona dia eny rehetra eny. Antony ampy tsy hijerena manodidina ny teny sy teny mahafinaritra momba ny fahanterana.
Teny nalaina, fitenenana ary fahendrena momba ny fahanterana sy ny fahanterana
Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo teny nalaina sy fahendrena tsara indrindra momba ny fahanterana sy ny fahanterana:
Tsy mitondra fahendrena foana ny taona. Indraindray tonga irery izy io. Mark Twain
Teny nalaina momba ny taona sy ny fahanterana
Ny fahanterana dia fiovana ara-batana tsy azo ihodivirana eo amin'ny zavamiaina miaraka amin'ny fahaverezan'ny fahaiza-mizatra miandalana. Georg Christoph Lichtenberg
Ny fahanterana dia reraka fotsiny alohan'ny hatory. Theresa Keiter
Ety ivelany dia mbola tanora ihany aho, fa ao anatiny kosa efa antitra be. Peter Rosegger
Ny fahanterana no betsaka milaza, fa vitsy ny te handre izany ary mandray azy am-po! Theodor Toeche-Mittler
Ny fahanterana matetika dia mahatonga ny olona iray ho sompatra, sivana, mafy fo ary tsy rariny amin'ny hafa. Wilhelm Ludwig Wekhrlin
Ny kintana dia mandreraka ny saintsika mihoatra ny tarehintsika. Michel de
Ny fahanterana, ny hazavan'ny volana amin'ny fiainana, dia tsy misy oram-baratra. fa eo ambanin'ny tara-masoandro vao miposaka izy ireo. Jean Paul
Ny tsiambaratelon'ny fitomboana araka ny tokony ho izy dia mitoetra amin'ny fehezanteny iray: malefaka ihany ny fotoana amin'ireo izay miatrika fotoana moramora. Anatole France
Ny ratsy ratsy indrindra dia ny mamela ny fatoran'ny velona alohan'ny hahafatesanao. Lucius Annaeus Seneca
Ny fiakaran'ny eritreritry ny fahatanorana dia miova amin'ny fahanterana ho mangingina anaty faribolana azo. August Pauly
Ny matoatoa ny volo fotsy dia miteny avy aminao. Friedrich Schiller
Matetika ny tanora dia omena tsiny noho ny finoana hatrany fa vao manomboka amin'izy ireo izao tontolo izao. Marina. Fa ny fahanterana kosa dia mino matetika kokoa fa hiaraka aminy izao tontolo izao. Inona no ratsy kokoa? Friedrich Hebbel
Ny voaloboka dia manome voaloboka maro, fa ny ela kosa manome divay tsara. Francis Bacon
Mampatahotra ny tanora ankehitriny. Tsy manaja tanteraka ny volo nolokoina mihitsy izy. Oscar Wilde
Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny fahatanorany hanimba ny fahanterany. Jean de La Bruyère
Ny ankamaroan'ny olona izay antitra aloha dia. Misy zaza zokiolona, ​​toy ny fanahin'ny zaza ihany amin'ny olona antitra. Carl Ludwig Schleich
Mamelombelona ny fanahy ny siansa ary mampihena ny fangidian'ny fahanterana. Noho izany, angony ny fahendrena toy ny sakafo mamy amin'ny fahanterana. Leonardo da Vinci
Ny hazo antitra iray dia manana faka lalina ary tsy tafiditra ao anaty korontana. Kaisara Flaischlen
Lehilahy antitra iray izay sitrana: avela hijery manodidina anao indray ianao izao rehefa hiala an'izao tontolo izao. Friedrich Hebbel
Misy ve ny olona mandritra ny vanim-potoana iray iainana? Moa ve epilogetra fotsiny ny fahazazana sy ny fahanterana? Hedwig Dohm
Manana fitoviana amin'ireo vanin-drivotra aho, izay raikitra fotsiny raha vao harafesina. Voltaire
Amin'ny fahanteran'ny olona dia mahatakatra tsara kokoa ny fomba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana, amin'ny faharetan'ny fahatanorana. Arthur Schopenhauer
Amin'ny fahatanorantsika dia tsy manana ny sambo ho enti-miady isika; ananantsika izy ireo rehefa antitra, nefa ritra ny riaka. Johann Jakob Mohr
Amin'ny lalao mitabataba dia fantatsika ilay zazalahy, amin'ny asa be atao ny lehilahy matotra ary amin'ny malemy paika miteny amin'ny anti-panahy. John William Draper
Arakaraky ny itomboan'ny taona antsika, no vao mainka lasa mahazatra antsika izao tontolo izao; saingy tsy manana hery hisarihana izany amintsika intsony isika, ary noho izany dia mijanona lavitra antsika noho ny teo aloha izy io. Johann Jakob Mohr
Arakaraka ny maha-antitra antsika, ny zavatra toa voajanahary amintsika izay tsy fantatsika taloha. Peter Sirius
Ny vanim-potoana rehetra dia afaka mampiasa tsara ny fiainana, fa ny fahafaha-manao zavatra ihany no hainao raha toa ka niaina izany taona izany ianao. Sully Prudhomme
Toy ny natiora namboarina ny tanora; ny anti-panahy dia tsaboin'ny tanana maloto matetika amin'ny tontolo iainana. Edmond About
Te ho ela velona ny zava-drehetra, saingy tsy misy te-hihantitra. Johann Nepomuk Nestroy
Tsy tokony hitondrantsika zava-manan'aina toy ny kiraro, vilany ary lapoaly, izay hariantsika rehefa tonta sy tonta amin'ny serivisy izy ireo. Plutarch of Chäronea
Tsy maintsy manapaka tehina ianao amin'ny fahatanoranao mba hahafahanao mandeha eo aminy rehefa antitra ianao. Confucius
Ny ankamaroan'ny zavatra tsy noraharahiantsika tamin'ny fahatanorantsika dia tonga tahaka ny oram-baratra taty aoriana. Peter Sirius
Miaraka amin'ny fahanterana, mitombo ny fitsarana ary mihena ny fahaizana. Immanuel Kant
Tsy ny taona no olana, fa ny fiheverantsika azy. Marcus Tullius Cicero
Tsy ilay tovolahy no tokony hoderaina fa sambatra, fa ilay antitra niaina tsara. Epicurus an'ny Samos
Tsy antitra ianao rehefa mijanona tsy manao hadalana tanora, fa rehefa tsy mamela azy ireo intsony. Peter Sirius
Tsy misy na inona na inona mahatonga anao ho antitra haingana kokoa noho ilay fieritreretana mitsingevana fa mihantitra ianao. Georg Christoph Lichtenberg
Tsy misy fanamavoana hafa noho ny lohan'ny tovolahy mirongatra volo fotsy. Gotthold Efraima Lessing
Tsy misy olona tia ny fiainana toy ny olona antitra. Lucius Annaeus Seneca
Miresaka momba ny maoderina tsy misy fanamavoana sy ny taloha tsy manompo sampy. Philip Stanhope
Na ny manam-pahaizana aza tsy afaka nanoratra famelabelarana lava momba ny fifaliana rehefa antitra. Otto Weiss
Eo ambanin'ny vesatry ny lanezy amin'ny taonantsika dia ny maitso maitso an'ny feon'ny fieritreretana tsara, mitsimoka ny lanezy, ilay mpitondra hafatry ny lohataona mandrakizay. Wolfgang Menzel
Aza manakorontana ny fiafaran'ny fiainanao! Anton Pavlovich Chekhov
Tsy misy zavatra tokony hotandreman'ny fahanterana mihoatra noho ny hoe mitolo-tena amin'ny hakamoana sy ny tsy fampiasana. Marcus Tullius Cicero
Izay namelombelona antsika tamin'ny fahatanorantsika dia tsy maintsy misintona ny tenantsika amin'izany isika rehefa antitra. Johann Jakob Mohr
Rehefa antitra isika dia manomboka mifamaly, te ho hendry nefa isika no adala lehibe indrindra. Martin Luther
Fa na iza na iza tsy manana ny mety hanana fiainana tsara sy falifaly ao aminy dia sarotra amin'ny taona rehetra. Marcus Tullius Cicero
Tsy misy fotony, tsy azo iarahana, malemy, tsy misy fifaliana dia tonga ny fahanterana, ny fitambaran'ny zava-dratsy rehetra. Sophocy
Mihantitra isika rehefa manomboka mampifaly antsika ny fahatsiarovana, antitra isika rehefa mandratra antsika. Peter Sirius
Moa ve ianao lasa malefaka sy tsara kokoa koa rehefa manakaiky ny fahanterana? Horace
Gerne fügen wir unserer Sammlung der schönsten Zitate und Weisheiten über Alter und das Alt werden weitere Sprüche hinzu. Aza misalasala mifandray aminay.